သဒ္ဓါလှိုင်း: တခါတုန်းက ဒီဇင်ဘာ
ဒီဇင်ဘာလ ကိုကျွန်မ အရမ်းချစ်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်မကို ချစ်တတ်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတယောက် ကို တွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ ပြီးတော့ ဘ၀မှာ ညီအမ တွေလို အင်မတန် ချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရလို့ ပါပဲ။ ဆောင်းတွင်းရဲ့  ဒီဇင်ဘာလ တလမှာပေါ့….. ကျွန်မတို့ ကျောင်းနှစ်ရှည် ပိတ်ထားပြီး ကျောင်းပြန် ဖွင့်မယ် ဆိုတော့ ကျွန်မ အရမ်းပျော်တာ ပဲလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဂုဏ်ထူးတန်း ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ တက်ခွင့် ရလို့ပါ။ အဲဒီ အချိန်မှာ သူငယ်ချင်း တော်တော် များများနဲ့ ဝေးကွာပြီး သိပ်မရင်နှီးသေး တဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက်က ဆက်သွယ်ပြီး ကျောင်းတက်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းစတက်တဲ့ နေ့မှာ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ချိန်းပြီး တက်ရမဲ့ အတန်းကို သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထဲမှာ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နဲ့ပေါ။့ ကျွန်မတို့ ဓါတုဗေဒမေဂျာ (ဂုဏ်ထူတန်း)မှာ ကျောင်းသား အားလုံး နှစ်ရာကျော် ရှိပါတယ်။ စတက်တဲ့ နေ့မှာပဲ သူ့ကို သတိ ထားလိုက်မိ ပါတယ်။ အနွေးထည် ထူထူဝတ်ထားတဲ့ သူ့ကို အားလုံး ထဲမှာ အမှတ် ထင်ထင် တွေ့လိုက်ရတယ်။ ပြုံးပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောနေတဲ့ သူ့ကို ရင်ထဲမှာ တသက်စာ အမှတ်ရသွားစေတာ ကတော့ မေ့လို့ မရပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့တာ စစပိုင်း သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ တော်တော် ပျင်းခဲ့တာ။ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတော့ ဘယ်မှလဲ မသွားဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေ ရလာရင် အရမ်း ကောင်းမှာပဲလို့ ပြောနေ ခဲ့ကြတာ။ နောက်ပိုင်း ကျွန်မ အပါအ၀င် မိန်းကလေး သူငယ်ချင်း ခုနှစ်ယောက်နဲ့ ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ရပြီး ညီအမ မက ချစ်ခင် ခဲ့ကြတာ အခုထိပါပဲ။
တယောက်ရဲ့ အကျိုးကို တယောက်က လိုလားပြီး တိုင်တိုင်ပင်ပင် ချစ်ချစ်ခင်ခင် နဲ့နေကြလို့ တခြား သူတွေရဲ့ တအံ့တသြနဲ့ ချီးမွန်းတာ ကိုလည်း ခံရတဲ့ အထိပါပဲ။ တယောက်က တခုခု လုပ်ချင်တယ်ဆို တယောက်က ဖြည့်ဆည်း ပေးဖို့လဲ ၀န်မလေး ခဲ့ပါဘူး။ ဂုဏ်ထူတန်း ဆိုတော့ စာတွေ ကလည်းများ ပရက်တီကယ် (လက်တွေ့) ချိန်ကလည်း များနဲ့ မနက် ခုနှစ်နာရီ ကစပြီး ကျောင်းတက်ရတာ ညနေ ငါးနာရီမှ ပြီးပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့ ပထမဆုံး တွဲတဲ့ သူငယ်ချင်းက လှည်းတန်း(ကမာရွတ်) မှာ နေပါတယ်။ ကျောင်းနဲ့ နီးတော့ သူငယ်ချင်း အားလုံး ရဲ့ဒဏ်ကို အခံရဆုံး ပဲပေါ့။ ကျွန်မတို့တွေ စာမေးပွဲနီးရင် လည်းအားလုံး စုအိပ်ပြီး စာလုပ်ကြရပါတယ်။ အဲဒီ အခါ ဆိုလည်း သူ့အိမ်မှာနေ သူ့အိမ်မှာစားရင်း စိတ် ချမ်းချမ်းသာသာ နဲ့ ဆွေမျိုးရင်း တွေလို နေခဲ့ စားခဲ့ ရပါတယ်။ အဲဒီ သူငယ်ချင်းအိမ် ကလည်း တကယ့် ကို ကျေးဇူးရှင် တွေပါ။ ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက် ကလည်း အကိုတွေ လို စောင့်ရှောက်ခဲ့ ချစ်ခင် ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီ လိုနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ကျောင်းမှာဆို နေရာကုန် လျှောက်သွားပြီး မတွေ့ရတဲ့ နေရာ မရှိ သလောက် ပါပဲ။ ဆရာမတွေ ကလည်း သမီးတို့က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထဲမှာ တက်ရလို့ အရမ်း ကံကောင်းတဲ့ သူ တွေတဲ့။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထဲမှာ များများသွား ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့က လည်း ဆရာမ စကားကို မြေ၀ယ်မကျ နားထောင်ပြီး အကုန်လုံးကို လျှောက်သွားတာ ပါပဲ။ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ ဆိုတော့ ဘာလုပ်လုပ် တတွဲတွဲနဲ့ အရမ်းကို ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့နေ့တွေပါ။ သူ့ကို ကြည့်ရတာလည်း သူ့သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အရမ်း ပျော်နေပုံပါပဲ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ကလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပုံစံလေးပါပဲ။ သူ့ကို ကြည့်လိုက်ရင် တော့ အမြဲလိုလို အနွေးထည် ၀တ်ထား တတ်ပါတယ်။
နောက်မှ သိရတာက သူက အားကစားကို လိုက်စားတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် အနွေးထည် ကို ၀တ်တာတဲ့။ ဘောလုံး ကန်တာ အရမ်း ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်မလည်း မယုံတ၀က် နဲ့ ဟုတ်ပါ့မလား လို့ပေါ့။ နောက်ကျမှ ကျောင်းမှာ ဘောလုံးပွဲ လုပ်မှ သူက ဓါတုဗေဒရဲ့ လက်ရွေးစင် တယောက် အဖြစ် ၀င်ကစား တာ ကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီအခါ မှာလည်း ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်း တွေက အမြဲတမ်း အားပေးနေကျပါ။
သူ့သူငယ်ချင်း တွေကလည်း ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်း အုပ်စု ဘောလုံးပွဲကို ရောက်လာတာနဲ့ သူ့ကို `ဟေ့….. မင်းရဲ့အားဆေး ရောက်လာပြီ´ ဆိုပြီး အော်ပါ တော့တယ်။ သူက လည်း အဲဒီ အချိန် ပြုံးပြီး ကြည့်နေ ပါတယ်။ ဘယ်လောက်အရေးကြီးကြီး ဘောလုံးပွဲ ကိုတော့ မရောက်ရောက် အောင် သွားအားပေး ပါတယ်။ အဓိက အသွား ချင်ဆုံး ကတော့ ကျွန်မပါ။ ဘောလုံးပွဲကို အော်ဟစ် အားပေးပြီး နိုင်ရင် တော့ ၀မ်းသာအားရ ပြန်လာ ရတာပေါ့။ ရှုံးတဲ့အခါ မှာတော့ အပြန်လမ်း တလျှောက် ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်း အားလုံး စကား မပြောနိုင်ကြပဲ ကိုယ်ရဲ့ မေဂျာ အစား ၀မ်းနည်း နေကြရတာပေါ့။
ကျွန်မတို့မေဂျာကို အမြဲလိုလို အနိုင်ယူတဲ့ ဘောလုံး အသင်းကတော့ `Law (ဥပဒေ) မေဂျာ´ ပါ။ သူတို့နိုင်လို့ ကျွန်မတို့ကို မခံနိုင်အောင် ပြောတဲ့ အခါ ကျွန်မတို့ ကလည်း ပြန်ပြောတာပေါ့။ `အနိုင်အရှုံးက အဓိက မဟုတ်ဘူး၊ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသာ အဓိက´ ဆိုပြီး မနိုင်နိုင်အောင် ပြောဆိုပါတယ်။ နိုင်တဲ့ အချိန် ဆိုရင်တော့ `ယှဉ်ပြိုင် နိုင်ရမည်´ ဆိုပြီး ပြန်ပြောပါတယ်။ သူဘောလုံး ကန်တာက အရမ်းကြည့်လို့ ကောင်းတယ် လို့ သူငယ်ချင်းတွေ ကို ပြောတော့ သူငယ်ချင်း တွေက အဖြစ်သည်းလွန်းတယ် ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ ကျွန်မကို ကြည့်ကြတာပေါ့။ ကျွန်မ ကလည်း ကျွန်မ ပါပဲ လေ။ သူ ဘာလုပ်လုပ် အမြဲကြည့်လို့ ကောင်းနေ တာပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ ကျွန်မကို တခါတလေ အားမလို အားမရ ဖြစ်ကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ပေါ့။
သူ့မွေးနေ့ ရောက်ရင်လည်း ရွှေတိဂုံဘုရား ကိုသွားလို့ သူ့အတွက် ကုသိုလ် ကောင်းမှု လုပ်ပြီး ဆုတွေ တောင်းရတာ အမောပေါ့။ အဲဒီ အခါမှာလည်း သူငယ်ချင်း တွေက ပါရမီဖြည့်ဘက် တွေပဲပေါ့။ ထူးခြားတာ ကတော့ သူ့မွေးနေ့နဲ့ ကျွန်မမွေးနေ့ က တပတ်ပဲ ကွာပါတယ်။ သူနဲ့ ကျွန်မက မွေးရက်လည်း အတူတူပါပဲ။ သူက ကျွန်မထက် တပတ် တိတိ ကြီးတာပေါ့။ အဲဒီအချိန် အတန်း ဘယ်လောက် အရေးကြီးကြီး အတန်းကို ဖျက်ပြီး ဘုရား ကိုတော့ ရောက်အောင် သွားပါတယ်။ သူက အရင်က မွေးနေ့တွေမှာ ဘုရားကို မသွားဖူးဘူးတဲ့။ ကျွန်မတော့ သိပ် မအံ့သြမိ ပါဘူးလေ။ မိခင် မရှိတော့တဲ့ သားတယောက် အတွက်တော့ မေ့ကောင်း မေ့နိုင်ပါမယ်။ မေ့ထား တာ လည်း ဖြစ်နိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မ သတိ ပေးမှပဲ ဘုရားကို သွားပါတယ်။ အခုထိလည်း ဝေးနေပေမဲ့ မွေးနေ့မှာ ကုသိုလ် လုပ်ပေးပြီး ဆုတောင်း ပေးပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် တော့ မေ့ကောင်း မေ့နေမှာပါ။
ကျွန်မရဲ့  ခံစားချက် ကတော့ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲ ခဲ့ပါဘူး။ ဒီနေ့ထိပါပဲ။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ဟာ ဘ၀မှာ အတူ လက်မတွဲခဲ့ရ ပေမဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာနဲ့ပဲ လမ်းကွဲခဲ့ ရတာပါ။ ပြန်မဆုံနိုင်တော့ ပေမဲ့ တသတ်တာ ထာဝရ အမှတ် ရနေမှာ ကိုတော့ ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းဆည်းထား လိုက်ပါရစေ။ မဆုံဆည်းခဲ့ပေမဲ့ အမုန်းနဲ့လမ်းခွဲတာ မဟုတ်ပဲ နားလည်မှုတွေနဲ့ လမ်းခွဲခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်လား။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့  လမ်းဟာ မတူညီခဲ့ပါဘူး။ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း ဟာ ဘယ်တော့မှ မဆုံစည်းနိုင် သလိုပဲပေါ့။ ကျွန်မတို့ master တန်းတက်တဲ့ နှစ်ကုန်မှာတော့ သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွား ခဲ့တယ်။
ထွက်ခါနီးမှာ ကျွန်မကို သူသွားမဲ့ အကြောင်းမပြောပြနိုင် လောက်အောင် သူလည်း ခံစား နေရတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ နှုတ်လည်း မဆက် နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မ နှုတ်ဆက် တာတောင် သူစကား မပြောနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ခံစားချက် ကတော့ ဘယ်လို ခံစားချက် မျိုးနဲ့မှ မတူပါဘူး။ သူသွားပြီး နောက်နေ့မှာ တော့ စိတ်တွေ ထွေပြားနေတာ နဲ့ မြို့ထဲသွား စာအုပ်ဆိုင် တွေ လျှောက်သွားပြီး စာအုပ်တွေ ၀ယ်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မကို ဆုံးမ လိုက်တဲ့ စာအုပ် ကတော့ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရဲ့  (လမ်းခွဲတာ ၀မ်းနည်းစရာလား) စာအုပ်ပါ။ အဲဒီ စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ကျွန်မဟာ စိတ် တည်ငြိမ် လာပြီး တော်တော် နေထိုင်တတ် သွားပါတယ်။
(အခုထိ ကြံ့ ကြံ့ ခံနေတဲ့ သစ်ပုတ်ပင်ကြီး)
အော်………. လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ တနေ့မှာ လမ်းခွဲကြရမှာ ပဲတဲ့. ကောင်းသော လမ်းခွဲခြင်းနဲ့ လမ်းခွဲခြင်း ကသာ အကောင်းဆုံး ပါပဲတဲ့။ လူတွေဟာ ဗေဒါပင်လေး တွေပါပဲတဲ့ ကံတရားဆိုတာ ကတော့ လေပါပဲတဲ့။ လေတိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဗေဒါပင်လေး တွေဟာ ဟိုတစု ဒီတစု ဟိုရောက်သွားလိုက် ဒီရောက်လာလိုက် နဲ့ ဟိုဘက်က ဗေဒါပင် အုပ်စုနဲ့ သွားပေါင်း သွားလိုက် တခါ လေတိုက်ရင် ဒီဘက်ကို ရောက်လာလိုက် နဲ့ ဘ၀ကြီးမှာ လည်း ကံတရား အတိုင်း ဟိုလူနဲ့ ဆုံလိုက် နောက်ပြန်ကွဲ သွားလိုက် နောက်ဒီလူနဲ့ ဆုံလိုက် ပြန်ကွဲ သွားလိုက်နဲ့ အားလုံးဟာ ကံတရား အတိုင်း အလိုက်သင့် နေကြရတာပဲတဲ့။ ကျွန်မ အတွက်တော့ အရမ်း အဖိုးတန်တဲ့ အသိ တွေရသွားခဲ့ ပါတယ်။
နောက် စာအုပ်ကတော့ (အနေဝေးပေမဲ့ အဝေးနေမဟုတ်ပါ) တဲ့။ အဲဒီ စာအုပ် ကလည်း အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက်ဟာ အနေဝေးတိုင်း အဝေးနေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ရင်ထဲမှာ မေတ္တာနဲ့ နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ဝေးဝေး မဝေးတော့ ပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ဝေးပေမဲ့ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေ အတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်ကြံမယ် ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားနဲ့ နီးနီးလေး ပါပဲတဲ့။ ကျွန်မ အတွက်တော့ သတိတရနဲ့ အမြဲ လိုက်နာ နေမိပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ အချိန် တန်ရင်တော့ အားလုံးဟာ သူ့ကိစ္စ နဲ့သူ သူ့ခရီးကို သွားနေကြတာပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ ကတော့ ဘ၀မှာ ညီအမလို၊ အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရခဲ့အတွက် အရမ်း ကံကောင်းခဲ့ ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း အတူတူ တိုင်ပင်ဖေါ် တိုင်ပင်ဖက် အဖြစ်နေ သွားကြရမှာပေါ့။ သူနိုင်ငံခြားက ပြန်ရောက်တဲ့ အခါကျတော့လည်း ကျွန်မက တခြား တနိုင်ငံကို ထွက်ခဲ့ရပြန်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဘ၀မှာ ဆုံဆည်းတယ် ဆိုတာကို မသိ လောက်အောင်ကို ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
အခုတော့ အတူတူ တက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းကြီး(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) ကို အရမ်း လွမ်းနေတယ်။ အာစီ(RC)ကို လွမ်းတယ်။ ကျောင်းကြီးထဲက ပရက်တီကယ် (လက်တွေ့)ခန်းကိုလည်း လွမ်းတယ်။ ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမကိုလည်း လွမ်းတယ်။ ဂျပ်ဆင် ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ သိပ္ပံဆောင်ကြီး ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ ပုဂံလမ်း ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ စစ်ကိုင်းလမ်း ကို လည်း လွမ်းတယ်။ နေ့တိုင်း ထိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ (ကန့်ဂေါ်ရွာ) ဆိုင် ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ တခါတရံ ထိုင်ဖြစ်တဲ့ ၀ိဇ္ဖာကန်တင်း ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ အီကို ကန်တင်းကိုလည်း လွမ်းတယ်။ အဓိပတိ လမ်းမ ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ သစ်ပုပ်ပင်ကြီး ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ ကန့်ဂေါ်ပင် ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ ရေတမာပင် ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ အားကစား ခန်းမကြီးကိုလည်း လွမ်းတယ်။ စူပါရုဖ်ကား( super roof) နဲ့ ဂျစ်ကား( Shan Star) ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ လွမ်းတယ်……… လွမ်းတယ်……..အားလုံးဟာ လွမ်းစရာ ကြီးတွေပါပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ဝေးနေတဲ့ အချိန် ပိုပြီး လွမ်းနေမိတယ်................။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:28 PM
အားတာနဲ့ အဟောင်းတွေ ဖတ်ကြည့်ရင်း ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ဖြစ်သွားတာ..။ အော် လမ်းခွဲခဲ့ကြရတာလား.. အဲဒီတုန်းက အတော်ကြေကွဲရမှာပဲနော်..။
ကျောင်းအတွက်လွမ်းတာတွေ ရေးထားတာလည်း လွမ်းစရာကြီး.. ကျောင်းမတက်ဖူးပဲနဲ့ကို လွမ်းသွားတာ..။